Home Wararka Rooble oo baabi’iyay Guddoonkii ay doorteen Guddiga Doorashada Somaliland, lana wareegay…
Ra’iisal wasaaraha xukuumadda Xilgaarsiinta Maamed Xuseen Rooble ayaa baab’iyey oo meesha ka saaray doorashada guddoomiyaha iyo guddoomiye ku xigeennada ee ay kala doorteen labada Garab ee uu u kala jabay Guddiga Doorashada Somaliland.
War kasoo baxay xafiiska Ra’iisul Wasaare Rooble, kadib kulan uu la yeeshay Guddiga Goorashooyinka Xildhibaannada labada gole ee Gobollada Waqooyi, ayaa sheegay in xubnaha guddiga laga doonayo in ay ka madax banaanaadaan siyaasadda iyo aragtida dhinacyada.
Ra’iisul Wasaare Rooble ayaa shaaciyey in laga noqday doorashadii ay dhowaan dhinacyada Guddigu ku doorteen labada hoggaan, isla markaana uu Xafiiska Ra’iisul Wasaaruhu soo gudbin doono xiliga iyo goobta lagu qabanayo doorashada guddoonka guddigan.
“Sida ku qoran wareegtadii la idinku soo magacaabay, waxaad ka madax bannaan tihiin cid kasta oo siyaasad ku jirta, sida uu qabo habraaca doorashada, waxaa la idin kaga fadhiyaa waajibaadkiina inaad u gudataan si daacad ah oo waafaqsan hufnaanta doorashada, wixii caqabad ah ee idinla soo gud-boonaadana waxaad ula soo laabanaysaan Ra’iisul Wasaaraha oo ah hoggaamiyaha doorashada”. ayuu yiri Rooble oo la hadlayey xubnaha Guddiga Gobollada Waqooyi (Somaliland).
Arrintan ayaa ka danbeysay markii ay fashilantay waanwaan uu Rooble ku doonayey inuu isagu la wareego xalka khilaafka Doorashada Somaliland, kadib markii Garabka Guddoomiyaha Aqalka Sare Cabdi Xaashi C/llaahi uu diiday inuu arrinta Doorashada Dirta Waqooyi ku wareejiyo Ra’iisal wasaare Maxamed Xuseen Rooble.